Inkampani liyaziwa GT nabagibeli abanolwazi njengoba brand isimo nge a umlando ocebile. Kuze kube manje, njengoba wawusondela ukukhiqizwa kwe eziningi zezici ngabanye. Lokhu kunezinzuzo, kusukela ukungabi khona uhlaka ngokuvumela Onjiniyela ukuhambisa yentuthuko kwezobuchwepheshe ngebhayisikili. Kodwa yize kukhona nobunzima ekumisweni yochungechunge ngabanye, ngisho onobuhle. Ngalo mqondo, libhayisikili GT Avalanche Comp 2014 okuyinto Izibuyekezo impikiswano, kufanele sithathwe njengehlelo wangempela. Yena akunakwenzeka ukuba ivumelane lokhu kumnandi entabeni drive nolaka futhi uyokusiza nawe ukuba ngizole edolobheni uhamba. Mhlawumbe kumele lithathwe ngokuthi ibhayisikili jikelele, kodwa lapha kukhona lonke uchungechunge lwemibuzo. Noma kunjalo, libhayisikili is amehlo ochwepheshe, ngakho kuwufanele sokumazi.
ulwazi olujwayelekile mayelana ibhayisikili
Njengoba kushiwo ngenhla, ukubeka okuqinile imodeli akukho. Abagibeli bamabhayisikili badlula angaya up kunoma yimuphi umuntu oye wanquma ukuchitha isikhathi sokungcebeleka ngesimo ngezicathulo epaki, idolobha noma ithrekhi udoti. Okungukuthi, le ndlela akuyona kulabo ufuna "ithuluzi" ekhethekile ukuze uxazulule izinkinga niche rayderskih. Futhi okwamanje ngasesinqeni se libhayisikili ngempela ehloniphekile. Okokuqala ezihlongozwayo isondo 27 ngesivinini nakatistye, isondo okuqinile futhi ezinhle amabhuleki wokubacindezela. imodeli ezahlukene kanye nomklamo. Ikakhulukazi, amaklayenti ukufinyelela version GT Avalanche Comp 2014 Matte Black, kanye inketho nge touch Habib Blue. Uma uqhathanisa ibhayisikili nofunda nabo emgqeni ekhaya GT-ke ziqokonyiswe isisindo lite futhi Uhlaka eqinile. Nalapha futhi, lezi zici athembisa umnikazi kokubili pluses kanye minuses. Ngokwesibonelo, rigidity ngokuqinisekile usizo olukhulu ngokuya ukuthembeka ibhayisikili. Kodwa futhi kunciphisa induduzo lapho ushayela ku enkantolo kanzima.
Ulayini GT imodeli iphathelene uhlobo Inqola Hardtail. Mhlawumbe ilebula ezinjalo ngeke ukucacisa isimo ngenhloso zedivayisi. Ngakho, isici ibhayisikili onjena ube tight isigamu emuva ngaphandle ukushaqeka ezidayiswayo. Kulokhu, abaklami esetshenziswa luhlaka ekhethekile, okuyinto eyokwenza ukuqina GT Avalanche Comp 2014. Izibuyekezo bathi isakhiwo Uhlaka eliphezulu Alloys is iphuzu okunamandla Hardtail ummeleli. Manje kubalulekile ukuya phambi libhayisikili. Ngalesi sikhathi, kukhona khona ekuphambukeni ukumiswa, yakhelwe ukuncela semfene. Ekusebenteni, lezi model elula ngokuthi kahle ukushova luyanda ziqhathaniswa emabhayisikili ku ukumiswa double. Lokho inqubo ukushova amandla elakhiwe ngeke "ukudla" ezengeziwe ukushaqeka ezidayiswayo.
Izici GT Avalanche Comp
Naphezu kweqiniso lokuthi imodeli ilahlekelwa abaningi abangochwepheshe emabhayisikili intaba, has a lot of okuqinile "amawijethi" lobuchwepheshe emidlalweni eyingozi. Ngakho-ke, uma ufuna i-ibhayisikili ezingabizi ngesethulo ongakhetha entsha rayderskih yisisombululo omuhle kuzoba GT Avalanche Comp 2014. Izimpawu imodeli zimi kanje:
Floor - unisex.
Uzimele - aluminium ashiselwe ukwakhiwa.
Fork - by SR Suntour ngokuqinile 10 cm unhlangothi.
Senqola - utakwetfula izindlela Tange afakwe ezimvilophini.
Eselishova - "Line Slim" ecaleni plastic.
Ishintsha - Shimano uhlelo. Ukuze phambili isetshenziswa Acera imodeli, bakhulise - Deore.
Chain - KMC Z99 uhlelo.
Tyres - kusukela inkampani Continental ku 26 amasentimitha.
Ukumiswa - uhlobo Hardtail.
Amabhuleki - wokubacindezela Promax wokufunda amalungiselelo niqinile Rotor-16 cm.
Model iza embodiments eziningana ntathu, kuhlanganise S, M, XL nabanye. Kodwa kubalulekile ukuba acabangele ukuthi sokwakha kusikisela luhlaka mfushane GT Avalanche Comp 2014. isisindo kulokhu 14.1 kg.
Isici esiyinhloko imodeli - a Kathathu Triangle design esiyingqayizivele. Iso onekhono ukuqaphela shazi ukuhlelwa ngisho ngaphandle ozimele logoptipov, ukuphrinta kanye nezinye izimpawu ehlukile izincazelo. Ubuchwepheshe simiswe ngalendlela lelandzelako: izakhi feather uxhumano waqaphela futhi engenhla esihlalweni Uhlaka amashubhu, ukuze umthwalo ngokweqile siqedwa. Esikhathini idatha standard design ipayipi obala ingcindezi at nokugoba. Ngakwelinye ihlangothi, GT Avalanche Comp 2014 okuyinto ozimele isithombe ngezansi atholakala ukulawula kubhekeleke kangcono, ukushova ngempumelelo nokwakhiwa ngokuvamile eziqine kakhudlwana.
Ngu zobuchwepheshe iyisibusiso imodeli zihlanganisa amathayi isampuli. Nokho, kuyinto kunalokho sokunconywa-abakhiqizi kulezi zingxenye. Ikakhulu, i-model of isondo Continental Race uyinkosi inkampani German sizonikeza zokuphepha nenduduzo lapho ushayela phezu uhlevane. Ingibe yena, okwethulwa sha Shimano, futhi lokho kwenza umkhawulo ijubane libhayisikili GT Avalanche Comp 2014. Izibuyekezo indlela, dwebela ukusebenza eliphezulu futhi iwusizo eqhuba nebhayisekili okuye kwafezwa ngaphandle ukubandakanywa Abenzi ngenhla okuthiwa.
Nakakhuluma ngalabo izinzuzo, wazi ukuthi abasebenzisi ezinsukwini yokusebenza kuqala, ukunikeza engasindi, umsebenzi olunembile ukushintshwa bese izinga ukuthutha. Ngenhlonipho ukushayela cishe zonke nabagibeli sokukhuluma kahle mayelana namathuba iyenqa. Uma ngokuhamba kwesikhathi, izinkinga eziningi yakuphawula amathayi, GT ixazululwe le nkinga. Nakuba zikhona izitatimende mayelana iraba umsindo, okuyinto ehlupheka GT Avalanche Comp 2014. Izibuyekezo Yiqiniso, ngicela ungadluli usuke, futhi izinzuzo isakhiwo uzimele. Lapho zonke izimo kubangelwa ukuqina, ukuphila service enhle futhi enokwethenjelwa inikeza. Ngo inqubo control, zonke izindlela abasebenza kahle. Kuye ngesidingo futhi kuqinisekisa ride bushelelezi nemininingwane impendulo ecolekile. Endaweni ehlukile, kunemibono ku amasondo ayo. Abanikazi bathi ukudlala yayo, okuyinto, kuhlangene ekuphambukeni elithambile, ukunikeza ukushayela ergonomic futhi zikhululekile.
I ethile ezimbi kakhulu - kuba ukubopha. Ngokusho abanikazi, naphezu ukubulawa eliphezulu disk izindlela, izibambo zawo ukulawula ukusebenza kahle. kuphakama inkinga ngenxa yokugcwala ezinkulu - ngenxa impendulo yokwesatshiswa yomsebenzisi imisiwe noma ngesikhathi. Nakuba, futhi, uhlelo uqobo isezingeni enhliziyweni amahle kule Ensemble jikelele GT Avalanche Comp 2014. Izibuyekezo abanye abanikazi uthi, nakuma-plug amaphutha. Noma ngeke kushintshwe, noma ngendlela engafanele wenza umsebenzi walo. Omunye ethile emehlweni abanikazi ibhayisikili kakade isibe ukuqina kumakwe. Futhi lokhu kusebenza futhi isakhiwo ngokwaso, okuyinto awunazo ezingemuva ukushaqeka wezinciphisi nesihlalo. Kunengqondo, banikezwe kakade hhayi ukumiswa elithambile, kwaba yokondla isihlalo ngokunethezeka. Kodwa lokhu akuzange kwenzeke, kodwa khona umklamo amahhanisi ezikhangayo.
Amanani kanye izimbangi
Imodeli kungabonwa njengoba emelele-agcwele amabhayisikili eliphezulu, kanye ukukhiqizwa lemikhiqizo Giant, Ngilubone, Scott et al. Isimo High kugcizelela ukubaluleka futhi GT Avalanche Comp ngo-2014, lapho kuhluka 25 kuya ku-30 eziyinkulungwane. Deda. Uma ngaphezulu esinda kubhekwa ingxenye Inqola Hardtail, lo mncintiswano kuyoba kancane. Lokhu kungenxa kakhulu nezindaba ezivela Akhethekile, Umbhali, futhi Comanche. Bafana ngendathane imodeli izici eziyinhloko futhi izindleko. Ngakho-ke, uma ukudida rigidity, kunengqondo ukukhetha Akhethekile. Nokho, GT has ikhadi trump ngesimo isisindo encane, okuyinto nakho kunikeza inzuzo sina.
Bayalithakasela Isasasa Esinalo imodeli GT Avalanche Comp 2014 sekunzima zingachazwa ngezinqubo iyiphi inzuzo eyodwa noma inzuzo yokuncintisana. Mhlawumbe kungenxa umehluko kusuka iningi emabhayisikili entabeni futhi eyedwa iziqu ekilasini izinguqulo elicwengiweyo emadolobheni wayecabanga ukuthi lokhu ibhayisikili edonsela okwakhe. Ukuze esilinganayo ayizinkulungwane ezingu-30. Hlikihla. ungakwazi ukuthenga umshini kuhle ukuhlaselwa kakhulu noma uthole obusebenzayo umngane ezimbili ezinamasondo ekuphumuleni emapaki. Inkinga nje ukuthi kuyoba ongakhetha alizimele, kuyilapho Avalanche Comp organically komculo izici ezihlukahlukene. Empeleni, iqoqo okunjalo izimfanelo futhi ukunika ilungelo shayela imodeli jikelele ibhayisikili multi-purpose. Ungakhohlwa ukuthi kungokwalabo brand owaziwa, ngakhoke isabelo udumo kuleli yokufuna Akungabazeki ukuthi.
Inyama yenkomo in ucwecwe - ukulungiselela isidlo esihlwabusayo wabe esethi mnandi
Imithetho eyisisekelo ngokugcwalisa encwadini umsebenzi
Gripe - kuhle noma kubi?
Uthishanhloko inombolo quantum njengoba inkomba eyinhloko isimo electron